Manchester United Oo Joojisay Iibinta Garamada Uu Ku Qoran Yahay Magaca Mason Greenwood - GOOL24.NET
Manchester United Oo Joojisay Iibinta Garamada Uu Ku Qoran Yahay Magaca Mason Greenwood
Manchester United ayaa qaadday tallaabo kale oo ay ku ciqaabayso xiddigeeda xidhan ee Mason Greenwood ee loo hayso inuu ku kacay kufsiga, kaas oo markii shalay boolisku qabteen ay kooxdu sheegtay in aanu garoonkeeda tababarka iman doonin, una ciyaari doonin illaa inta kiiskiisu dhinac u dhacayo.
Red Devils ayaa waxay joojisay iibinta garamada iyo dharka kale ee uu ku qoran yahay magaca Mason Greenwood, waxaana dhamaan dukaamada Online-ka ah laga saaray dharkii uu ku qornaa magaca laacibkan ee Online ka lagu iibsanayay.
Dukaamada Online-ka ah ayaa marka laga raadinayo magaca Mason Greenwood, waxa soo baxaysa jawaab ah; “”Waanu ka xunahay, raadintaada Mason Greenwood ma jiro alaab ku calaamadsan.”
Waxa kale oo ay Manchester United ka saartay laacibkan qaybta website-keeda ee ‘Shop By Player’ ama ‘Ka Dukaamayso Ciyaartoy’ oo awal hore marka la gujiyo ay kasoo bixi jireen alaabo kala duwan sida garamo, kabo, nigisyo, funaanado iyo dhar kale.
Shirkadda Manchester United u samaysa dharka ee Adisa iyo shirkadda uu laacibkani kula jiro heshiiska xayaysiinta ee Nike ayaa qoraallo ay soo saareen waxay ku sheegeen uga xun yihiin falka uu ku kacay laacibkani.
20 jirkan ayaa Manchester United waxa uu xilli ciyaareedkan socda u saftay 16 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah, waxaanu u dhaliyey shan gool.
Dhinaca kale, Booliska ayaa maanta xaqiijiyey inay sii hayn doonaan Mason Greenwood oo uu xidhnaan doono illaa inta laga dhamaystirayo baadhitaanka kiisiisa, kaddibna ay geyn doonaan maxkamadda.